स्टुडियो टाईम : ०९:५०
२०७४ श्रावण २ सोमबार ०९:५०
२० वर्षअघि मेयरमा चुनाव जितेका धवल शमशेर राणा यसपटक पुनः नेपालगञ्ज उपमहानगरको मेयर पदमा निर्वाचित भएका छन् । ०५४ सालमा नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेका उनी यसबीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महामन्त्री बने मेयर पदमा चुनाव जिते पनि । नगर बदिलिएर उपमहानगर बन्यो तर मतदाता बदलिएनन् । दुई दशक अघि करिब ७७ सय मतले मेयर जितेका धवलले यसपटक १२५१५ मत ल्याएर जिते । प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका सुरेशकुमार कनोडियाले ८७३० मत ल्याए । निर्वाचन जितेपछि खुसियाली साट्दै गर्दा उनीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको थियो :
२० वर्षपछि नेपालगञ्जमा मेयर जित्नु भएको छ, जितको कारण के हो ?
मैले २० वर्ष पहिले नेपालगञ्ज नगरपालिकाको मेयर जितेको हुँ । त्यसपटक अहिलेको जस्तो साधनस्रोत थिएन । तर पनि बिकासको शूत्रपात भएको थियो । परिवर्तनको आभास भएको थियो नेपालगञ्जबासीलाई । २० वर्षअघि मेयर उठ्दै गर्दा नेपालगञ्जबासीले जुन विश्वास गर्नु भएको थियो, २० वर्षपछि पनि त्यसमा ह्रास आएको रहेनछ । यसले काखापाखा गर्दैन, तेरोमेरो भन्दैन । जनताले अह्राएको काम गर्छ भन्ने उहाँहरूलाई परेको रहेछ । त्यसैको प्रतिफल हो मेरो जित ।
मेयरमा राप्रपाले उपमेयरमा कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ, सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुहुन्छ ?
चुनाव अघि पो फरक पार्टीका कार्यकर्ता थियौँ । अहिले त हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरका निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका छौँ । अर्को, चुनावअगाडि हामी पार्टीको छत्रछायाँमा थियौँ । निर्वाचन जित्ने एजेन्डा फरक थिए । तथापि स्थानीय निर्वाचन भएकाले हाम्रा मुद्दा, कार्यक्रमहरू फरक–फरक थिएनन् । नेपालगञ्जको विकास नै हाम्रो साझा एजेन्डा हो । सामुहिक भावना हो ।
पार्टीगत विचारमा सहमति नभए पनि नेपालगञ्जको विकासमा हाम्रो विमती छैन । नेपालगञ्जबासीको सपना पूरा गर्न हामी सबै एक भएर लाग्छौँ । मेयरका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकामा मेरोतर्फबाट तेरोमेरो हुँदैन ।
फेरि निर्वाचित जनप्रतिनिधि त जनताको हो नि, कुनै दल या पार्टीको होइन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि पार्टी भन्दा माथि उठ्नुपर्छ ।
चुनावअघि व्यक्त गर्नुभएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न कत्तिको इमान्दार भएर लाग्नुहुन्छ ?
यसमा सन्देश मान्नु पर्दैन । अल्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम सुरू गर्छौ्रं । पहिलो, अहिले वर्षायाम भएकाले यहाँको सधैँको समस्या भनेको डुवान नै हो । त्यसको न्युनिकरणका लागि आजैबाट लाग्छु । के गर्दा ढल निकास व्यवस्थित हुन्छ, जनताले दुःख पाउँदैनन् त्यो गर्नेछु । वर्षा सकिएपछि प्राथमिकता छुट्टयाएर काम गर्न लाग्नेछु ।
२० वर्ष अघि गर्न नसकेका कामहरू पनि प्राथमिकतामा पर्लान् नि !
मैले मेयर जित्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो । २० वर्ष अघि मेयर जित्दा जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । त्यो धेरै पूरा गर्न सकिएन । केही नवीन कामहरू थालियो केही बीचमै अलपत्र परे । ती अधुरा र अपूरा रहेका योजना पूरा गर्छ भनेर नै मतदाताले मलाई मत दिएका हुन् । ती पुराना योजना पूरा गर्नु मेरो पहिलो कर्तव्य हो ।
देशभर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर देखिँदा तपाईंले जित्नु भयो, कसरी ?
नेपालगञ्जबासीको माया र यसअघि मेयर हुँदा गरेको कामको आधारमा जनताले विश्वास गरेका हुन् । नेपालगञ्जमा हामीले विश्वास जितेका छौं । अन्य ठाउँका बारेमा हामी समीक्षा गर्छौं ।
तपाईं पार्टीको महामन्त्री पनि हुनहुन्छ, राप्रपा देशभर कमजोर बन्ने अवस्था किन आइलाग्यो ?
चुनाव जित्ने होइन, जनताको मन जित्ने कुरा हो । जहाँसम्म राप्रपा कमजोर भएको प्रसंग छ, राप्रपाले यसबीचमा केही कमी कमजोरी गर्‍यो । एजेन्डाबाट पछि हट्यो भन्ने जनताको बुझाइ छ । त्यस्तै पार्टीले सरकारमा गएर भुल गर्‍यो । आफ्नो एजेन्डा छाडेर राप्रपा सरकारमा जानुहुँदैनथ्यो भन्ने कार्यकर्ता र जनताको विचार पार्टीले बेवास्ता गरेको देखियो ।
राप्रपा धर्मनिरपेक्ष विरोधी, हिन्दू पार्टी तर तपाईंले मुस्लिम बहुल भएको ठाउँबाट चुनाव जित्नुभयो । कारण के हो ?
हेर्नुहोस् हामीले मेयरमात्रै होइन ३ वटा वडा पनि जितेका छौँ । अझ दुई वटा वडा ४ र ५ नम्बर वडा त राप्रपाबाट मुस्लिम उमेदवार जितेका छन् । अन्यत्रको कुरा म भन्न सक्दिनँ तर नेपालगञ्जको सन्दर्भमा मुस्लिम, हिन्दू सबैले ‘यसले विभेद गर्दैन’ धवलले चुनाव जित्यो भने सबै समुदायको हितमा काम गर्छ भनेर विश्वास गर्नुभयो
धरानमा कांग्रेसको विकल्प छैन तिलक राई, उमेदवार (नेपाली कांग्रेस) धरान उपमहानगरपालिका ||
पूर्वको सुन्दर नगरी धरान यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यस्त छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीलाई भोट माग्न व्यस्त छन् ।
२० वर्षअघि मेयरमा चुनाव जितेका धवल शमशेर राणा यसपटक पुनः नेपालगञ्ज उपमहानगरको मेयर पदमा निर्वाचित भएका छन् । ०५४ सालमा नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेका
जेठ १ – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसलाई दिएको चेतावनीका बारेमा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले
जेठ ५ – क्युबाको राजधानी हवानामा भएको विमान दुर्घटनामा परेर १ सय १० जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ । क्युबाको सरकारी विमान सेवा कम्पनीको बोइङ